विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग अनौपचारिक वार्ताको पहल : को–को खटिए ? - Maxon Khabar
Home / News / विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग अनौपचारिक वार्ताको पहल : को–को खटिए ?
विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग अनौपचारिक वार्ताको पहल : को–को खटिए ?
काठमाडौं ३० असार सत्तारुढ नेकपा ले विप्लव नेतृत्वको अर्को नेकपासँग अनौपचारिक वार्ताको पहल थालेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै महासचिव पौडेललाई विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि खटाएको स्रोतले जनाएको छ ।
विप्लव समूहसँग भएका अनौपचारिक वार्ताबारे सोमबार बिहान नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको बताइएको छ । विप्लव समूहले हिंसा त्यागेर हतियार नबुझाएसम्म बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ता लगायतका माग पुरा गर्न नगर्ने सरकारले जनाएको छ ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले जेलमा रहेका विप्लव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्त प्रकाश ओलीसँग भेट गरेका छन। विष्णु पौडेल यसअघि सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने निर्णायक वार्तामा खटिएका थिए । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसहितका नेताहरु विप्लव समूहसँग अनौपचारिक सम्पर्कमा पुगेको नेकपा स्रोतले बताएको छ । नेकपाकै अर्का नेता तथा तत्कालीन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे पनि विप्लव समूहसँग रहेको बताईएको छ । सोमप्रसाद पाण्डेको टोलीले अनौपचारिक वार्ता प्रयास गरिरहेका बेला नेकपा "बिपलप" प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पक्राउ परेपछि सम्पर्क टुटेको थियो
सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न गत वर्ष पाण्डेको नेतृत्वका वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सो टोलीसँग वार्तापछि पूर्व र मधेसका कतिपय हतियारधारी समूह सहमतिमा आएर राज्यलाई हतियारसमेत बुझाएका थिए । सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल "प्रचण्ड " निकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि विप्लव समूहसँग अनौपचारिक सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ । विप्लव समूहको रणनीति पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छुटाउने र शक्ति आर्जन गर्ने योजना हुन सक्ने भन्दै यसमा फस्न नहुने सुझाव आएको स्रोतले जनाएको छ ।